तपाईको प्रेमी प्रेमिकाको राशि कुन ? जान्नुहोस् उनीहरुको स्वभाव कस्तो ? « News24 : Premium News Channel
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यहाँ राशि अनुसार मानिसको प्रेम ब्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार तुला राशिका ब्यक्ति महान प्रेमीमा पर्छन् । यिनीहरुको प्रेम गहिरो हुन्छ । तर यिनीहरु प्रेममा रहेपनि मानसिक तनावबाट गुज्रीरहेका हुन्छन् ।